Ihowuliseyili Magnetic pad-ngwevu yoMvelisi kunye noMthengisi | Sheerfond
Kwideskithophu yakho ecocekileyo, iphedi entle yemouse, ngaxeshanye ibambe ipeni kunye nefowuni ephathekayo, ngaba kukho ukuziva komlingo? Ewe, indawo yokugcina kunye nenxalenye yepats yemouse inokuhlulwa ngokuthanda, kwaye inokusetyenziswa Hlela iphepha kunye namatyala. Ulibale ukukuxelela owona msebenzi ubaluleke ngakumbi, siselfowuni engenazingcingo engenazingcingo, ukuba nje uyibeka kwifowuni inokuhlawuliswa nangaliphi na ixesha, emva koko mandazise le nto intsha ngokweenkcukacha:
1.Yiphedi yemouse yesikhumba, le mveliso isebenzisa izinto ezinobungozi kokusingqongileyo, kwaye ngakumbi inxiba enganyangekiyo kwi-PU, iziva ilungile, kwaye imouse ingatyibilika ngokukhululekileyo ngaphezulu.
2. Kukutshaja ngaphandle kwamacingo, ukubiza ngokukhawuleza, i-15W / 10W / 7.5W / 5W, zonke zinokusetyenziswa, xa usebenza, beka ifowuni kwidesktop, iya kuqala ukutshaja ifowuni yakho, kwaye inokutshaja kwakhona. Utshaja i-WTS engenazingcingo kwi-Bluetooth.
3. Kugcinwa kwedesktop, iipeni, iidrive flash drive, izikhonkwane zamakhadi, kunye neeraser zinokufakwa zonke ukwenza ukuba i-desktop yakho icoceke.
4. Luhlobo lokuhlela iifayile, ungahlela amanqaku, amatyala kunye nephepha.
5. Inxalenye yokugcina kunye nenxalenye yepats yemouse inokuchithwa ngokuthanda, la malungu mabini adityaniswa ngoomazibuthe.
6. Sisiphathi sefowuni esiphathwayo, xa ubukele ividiyo, ungasikhulula isandla sakho,
Ikwayimveliso enelungelo elilodwa lomenzi ekhusela iziqhamo zomsebenzi wethu.
Le mveliso intle iyilwe ngabaqulunqi bethu ngononophelo, kwaye ikwaconjululwa ngesandla ngabasebenzi benkampani yethu. Ngumsebenzi wezandla, imveliso elungileyo, awufuni ukuthatha isampulu ukuze ube namava ayo, ukuba iyakothusa, ungalibali Cebisa kubahlobo bakho.
Imeko zokuSebenzisa Imisebenzi yokuKhuthaza, uQeqesho kunye nokwakhiwa kweQela, iZipho eziMkelekileyo, ukubuyela esikolweni / ukuthweswa isidanga, Ukunikezelwa kweShishini elitsha, iZipho eziNikezelweyo, "Ndiyabulela" Izipho, Eminye imisebenzi
Ilogo yoshicilelo: CuCustom
Egqithileyo A4 handbag
Okulandelayo: Rose igolide
Ukutshaja kweMagnetic Wireless